Sosucam, oo ah shirkad ka kooban Somdiaa, ayaa ku guuleysata soosaarista duubitaankii 124 tan oo sonkor ah intii lagu jiray ololaha 2018-2019 - TELES RELAY
ACCUEIL » DHAQAALAHA Somdiaa's Sosucam wuxuu ku guuleystaa soosaarista Rikoodhka 124 Tonnes ee Sonkorta Xilliga Ololaha 2018-2019
(Maalgashi Cameroon) - Shirkadda Sonkorta ee Kameroon (Sosucam) waxay ku dhawaaqeysaa dhamaadka ololihiisa sonkorta ee 2018-2019 oo ay ku jirto soosaarista duubista 124 500 tan.
"Waxqabadka ayaa soo jeedinaya rajada wanaagsan ee shirkadda sonkorta Cameroon, in kasta oo ay jirto xaalad dhaqaale iyo gaar ahaaneed oo adag; Waxay jebisay rikoorkeedii hore ee 15 sano jir waxayna ka dhaaftay soosaaradeedii ugu dambeeyay wax kabadan 10% ", ayaa sheegaysa shirkadda hoos timaadda dowladda Cameroon ee Somdiaa.
Sosucam wuxuu intaa ku daray inay awood u yeelatay inay ku xisaabtamaan maalgashiga dhammaan shaqaalaheeda, iyadoo ay ku dhowdahay 8 000 shaqooyinka tooska ah iyo kuwa aan tooska ahayn, waxayna sidoo kale ka faa'iideysatey aqoonta sida ay u leeyihiin alaab-qeybiyeyaasheeda badan ama la-hawlgalayaasha, shirkadaha waa weyn iyo shirkadda SMEs ee Kamer. Shirkadda waxay aqoonsan tahay, si kastaba ha noqotee, in natiijadaani aysan qarin karin aagagga lagama maarmaanka u ah hagaajinta. Aagagga horumarineed ee ay sheegtay inay horay ugu dartay ujeedooyinkeeda waxqabadka. Kuwani waa tababarka joogtada ah ee shaqaalaha, waxqabadka sonkorta, muddada ka faa'ideysiga iyo tartanka warshadaha.
"Guushaani waxay cadeyn u tahay haddii ay jirto, tartan iyo heer sare ee warshadaha Cameroon guud ahaan iyo gaar ahaan Sosucam gaar ahaan, baahida loo qabo taageero wanaagsan oo lagu ilaaliyo xuquuqdeeda iyo la socoshada horumarinteeda, si looga dhigo libaaxyo tartamaya, waaxyo koboca iyo shaqooyinka dalka", Waxay soo dhaweyneysaa jihada guud.
Hogaamiyaha suuqa sonkorta ee Cameroon (70% caymiska), Sosucam wuxuu leeyahay awood wax soo saar celcelis ahaan tan 130 000 tan sanadkii, Thanks to aagga beeraha ee hadda ah ee 25 000 ha.
Soo ogow sirta 5 ee ganacsatada guuleysta si ay u bilaabaan maalinta
Discussion de transfert: Alexis rejoint Lukaku, ancien coéquipier de Man Utd, à l'Inter?
Vanessa Paradis apaisée, comblée par le bonheur de Lily-Rose (photo) – VIDEO